Malunga Nathi - Dalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd.
I-Chongqing Dahan Traffic Facilities Co., Ltd.
IChongqing Dahan Traffic Facilities Co., Ltd.Singumenzi weziko lothutho lobuchwephesha eligxile kuphuhliso, imveliso kunye nokuthunyelwa ngaphandle kwepeyinti yokuphawula yendlela enyibilikayo eshushu kunye nezibonelelo zothutho.Imveliso engundoqo ibandakanya ipeyinti yokuphawula indlela, oomatshini bokuphawula indlela, amaso eglasi akhanyayo. , i-titanium dioxide, i-C5 / C9 ye-petroleum resin kunye nokunye.Iimveliso zethu eziphambili ziye zadlula zonke iimvavanyo zoMphathiswa wezoNxibelelwano.Inkampani yethu inenkqubo yokulawula esebenzayo kunye nezixhobo zokuvelisa eziphambili.
Iqela lethu elomeleleyo le-R&D, umgangatho wemveliso ogqwesileyo, inkonzo esebenzayo emva kokuthengisa kunye nexabiso elikhuphisanayo lisenze safumana inqanaba eliphezulu lokuthembela kubathengi bethu ekhaya nakumazwe aphesheya.Okwangoku, iimveliso zethu zithengiswe kuMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, kuMbindi Asia, eAfrika, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe kunye nemimandla.
Asiboneleli ngeemveliso kuphela, kodwa sibonelela ngeenkonzo zobugcisa kunye nezisombululo kwiiprojekthi ezahlukeneyo zokwakha iindlela, ezifana neeprojekthi zokumakisha ezindleleni.Iqela lethu lokwakha indlela yokumakisha linamakhulu amawaka eekhilomitha zamava okwakhiwa kwendlela eTshayina ukunceda abathengi ekusombululeni naziphi na iingxaki ezinzima kulwakhiwo lwendlela.
Isiseko senkonzo ye-Dahan Transportation: Ukuba uyayifuna, kufuneka siphendule.